"Mifandefera, ka mifamelà heloka hianareo, raha misy manana alahelo amin'ny sasany; tahaka ny namelan'ny Tompo ny helokareo no aoka mba hamelanareo heloka kosa" Kol. 3:13.
Tsy ho tratrantsika na oviana na oviana ny fahatanterahan-toetra raha tsy mihaino ny feon'Andriamanitra sy mankatò ny toroheviny isika. Tsy ireo izay tsy nandalo fitsapana izay mety niteraka fankahalana ny rahalahiny fotsiny no iantefan'izany toromarika izany. Miantefa koa izany amin'ireo naratra, ireo niharan'ny fanararaotana ara-bola, ireo nanaovan'ny hafa fanakianana sy fitsikerana, ireo tsy nohenoina tsara na notsaratsaraina tsy ara-drariny. Aoka izy ireo tsy hamela ny fankahalana hiditra ao am-pony, na hanome toerana ny fihetsehampo tsy mendrika raha mifanatrika amin'ireo izay nanisy ratsy azy (...)
Hamela ny heloky ny fahavalontsika toa an'i Kristy isika, ka hikatsaka fotoana mety hanehoana amin'ireo nanisy ratsy antsika fa tia azy isika, ary raha azontsika atao dia hanisy soa azy isika ., (...) Raha manohy ny tsy mety ataony ireo izay nandratra antsika (...) dia tokony hiezaka hihavana amin'ny rahalahintsika isika. Atao izany ho fampiharana ny taridalan'ny Baiboly, araka ny toromarika nomen'i Kristy. Raha manda ny hihavana amintsika ny rahalahintsika, dia aza miresaka ny momba azy amin'ny hafa, na manaratsy azy. Apetraho eo am-pelatanan'ilay Andriamanitra marina izy, fa Izy no mitsara ny olombelona araka ny fahamarinana (...) Mety hilaza ny tanora fa manam-pitiavana lehibe ho an'ny asan'Andriamanitra. Mbola tsy vita fihavanana amin'Andriamanitra anefa izy raha mbola tsy mihavana amin'ireo tanora namany. Ireny (...) fihetseham-po feno fitiavan-tena izay ankamamiana ireny no misakana ny fitahian'Andriamanitra tsy hiditra ao am-pontsika sy ao an-tokantranontsika. Avelao ny fitiavan'i Kristy hitobaka ao am-ponao ka hanova ny toetrao, dia ho zanak'Andriamanitra ianao. — YI, 13 Janoary 1898.